Gudoomiyaha gobolka Bari oo Booqday Iskuulka Imaamu-Nawaawi ee Bosaaso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Gudoomiyaha gobolka Bari oo Booqday Iskuulka Imaamu-Nawaawi ee Bosaaso
Gudoomiyaha gobolka Bari oo Booqday Iskuulka Imaamu-Nawaawi ee Bosaaso
March 9, 2010 - By: Abdirahman. A
Gudoomiyaha gobolka Bari Sheikh Cabdi Xaafid Cali Yuusuf ayaa maanta booqasho ku tegay qaar ka mid ah dugsiyadda waxbarashada ee ku yaala magaaladda Bosaaso tan iyo marki loo magacaabay xilka u iminka hayo.
Subaxnimadii maanta ayuu booqday Iskuulka Nawaawi ee ka mid ah dugsiyadda ugu waa weyn ee ka jira degaanadda Puntland kaas oo ka kooban dugsi Hoose, Dhexe iyo Sare.waxaana kusoo dhoweeyey iskuulka Maamulka, Macaliminta iyo ardayda wax ka barata.
Gudoomiyaha ayaa inta ka dib khudbad ujeediyey ardayda dugsiga oo tiradooda kor u dhaafayso 500-arday,waxaana u kala dardaarmay in ay xoojiyaan waxbarashada ay iminka ku jiraan isla markaana ay ka miro dhaliyaan mustaqbalka ama markii ay soo dhameyaan.
Waxaana u xusay in burburka dalka Soomaaliya looga bixi karo Ciidamo aqoonta ka dhisan isagoo tusaale usoo qaatay wadamada Pakistan iyo Hindiya oo u sheegay in Ciidanka wadamadaasi ay leeyihin xarumo waxbarasho ayna yihin goobaha ugu qaalisan ee waxbarasho ee ku yaala halkaasi.
Maamulka dugsiga Nawaawi ee Bosaaso C/raxmaan Siciid Muuse ayaa isagu u hadlay Dugsiga,waxaana u Gudoomiyaha uga mahadceliyey socdaalka u ku yimi dugsiga Imaamu Nawaawi waxaana u ka codsaday Masuuliyinta Dowladda Puntland in ay ku deydaan Gudoomiyaha si loo dhiirageliyo dhalinyarada dhigata Iskuulka.
Tani waxaa ay noqonaysa markii ugu horeysay Gudoomiyaha gobolka Bari Sheikh C/xaafid Cali Yuusuf u booqasho ku tego mid ka mid ah dugsiyadda waxbarasho ee magaaladda Bosaaso, waxaa xusid mudan Gudoomiyuhu waxa uu ahaan jirey masuuliyiinta lafdhabarta u ah Iskoolka Nawawi.
Yuusuf Cali Maxamed(Sonna)